Ahoana no ahafahako mamorona Do Follow Followup links amin'ny tranokalako?
Tsy midika akory izany fa raha tsy misy profil-rindrambaiko malaza, dia saika tsy ho vitan'ny tranonkala ny hitsara tsara ao amin'ny Google, na farafaharatsiny hita eo anivon'ireo valim-pifidianana folo voalohany. Mba hisorohana ny fampiasana herisetra, ny fanodikodinana, na ny tricks rehetra miaraka amin'ny algorithm misy azy, dia efa nitombo nandritra ny taona maro ilay goavam-be eran-tany. Amin'izany fomba izany, i Google dia hamaly valiny fotsiny amin'ny lohamilina voajanahary, manan-danja sy be mpanaraka loatra. Ary etsy ambany dia hasehoko anao ny sasantsasany amin'ireo fomba hentitra indrindra hanamboarana Do Follow backlinks ho an'ny tranonkalanao. Nefa alohan'ny zavatra hafa, avelao aho hanomboka amin'ny famaritana tsotra roa.
Tsy ilaina ny milaza fa ny rohy dia mampiaraka ny teboka rehetra amin'ny aterineto - ny rehetra dia mahafantatra fa. Tsy ny rehetra anefa no mitondra ny lanjany. Raha ny marina, misy karazana rohy anankiroa - Tsy manaraka sy manao Follow back links. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny rohy miaraka amin'ny Non Follow dia saika tsy misy dikany ary tsy misy vidiny amin'ny fomba fijerin'ny motera lehibe. Izy ireo dia natao mba hitondra ny fifamoivoizana fotsiny. Etsy ankilany kosa, Do Follow backlinks dia mampiasa pejin-drindrina manokana, lahatsoratra ary tranonkala handefasana ny manampahefan'ny tranonkala iray amin'ny iray hafa.
Mahatsikaiky, Miverena ny rindran-damina dia sarotra kokoa ny mahazo, ary matetika indrindra izy ireo dia tokony ampidirin'ny webmaster mahay. Ary eto izahay dia tonga eo amin'ny teboka farany - etsy ambany ireo fomba maromaro (na maimaim-poana na indraindray) mba hananganana kalitao avo lenta Do Follow backlinks ho an'ny lalao avo indrindra ao amin'ny Google:
Google Plus dia sehatra sosialy iray izay mety ho lasa fitaovana mahagaga mahery raha ampiasaina amin'ny tsara. Ny zavatra rehetra ilainao dia tokony hanana ny mombamomba anao manokana na hanao sonia ny kaonty vaovao. Farany, mandehana any amin'ny fizarana "amin'ny" ary manontana ny votoatin'ny lahatsoratra, ary koa ny rohy voalohany nomena ny tranokalanao tamin'ny voalohany. Aza misalasala manoratra betsaka toy ny mahazatra. Miezaha mamaky bakolina araka izay ilainao, fa aza ovainao izany. Raha tsy izany, mety heken'ny Google ho toy ny spam na manipuler ny fikirizanao.
Ny faharesena dia tranonkala efa tranainy tsara izay nanampy ahy amin'ny Do Follow Follow backlinks nandritra ny taona faramparany. Miantehitra fotsiny mba hahazoana milina fanontana manokana, ary mahatsiaro maimaim-poana ny fidirana amin'ny tranonkala manontolo ary misafidy ny sokajy ilainao.
Dmoz koa dia tranokala tranainy iray, izay mifandraika amin'ny fanoratana bilaogy ho an'ny tanjona ifoton'ny rohy. Ny zavatra rehetra ilainao ao amin'ny Dmoz dia ny mifantina ny sokajy mahakasika ny lohahevitra fototra amin'ny tranokalanao na ny blôginao. Anisan'izany ny endri-javatra tsy manam-paharoa, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ity loharano ity mba hahitana ny backlinks tsara noforonin'ireo mpifaninana akaiky anao mba hampiasa azy manokana.
Storify dia toerana tsara hahazoana fanampiny fanampiny Follow Follow backlinks - tsy avy amin'ny fanehoan-kevitra fotsiny. Mamorona kaonty vaovao ary mandehana amin'ny fizarana "mafana". Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hankafy faran'izay tsara avo roa heny ianao amin'ny alàlan'ny kaonty iray.
Azonao atao ny mitsidika an'i Trell. Miaraha mikarokarena ary miverimberà maro mba hanamafisana ny laharanao araka izay tianao. Ankoatra izany, tsy hampandoavinao dollar izany - ny fahafahana dia afaka. Ataovy izany indray, tadidio indray mandeha indray - aza manadino ny isa amin'ny lisitry ny backlink sy ny famoronana haingana. Raha tsy izany dia hanangana sainam-pirenena mena ianao izay miantso an'i Google ho an'ny sazy tsy azo ihodivirana Source .